ဂျပန်ဘာသာစကားဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာသလဲ ?!!!! - JAPO Japanese News
ဂျပန်ဘာသာစကားဘယ်ကနေ ဆင်းသက်လာသလဲ ?!!!!
ဂါ 28 Jul 2020, 12:05 ညနေ
ဘာသာစကားအသစ်ကိုကျက်မှတ်ရတဲ့အချိန် ခက်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့နှိုင်းယှဥ်ပြီး မှတ်သားရလွယ်ကူတဲ့ဘာသာစကားဆိုတာရှိပါတယ်။ ဒါဟာဘာသာစကားအသီးသီးမှာ ခက်ခဲမှုတွေလည်းရှိပေမဲ့၊ ကိုယ်တိုင်မှတ်မိတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ ဆက်စပ်နေမှုဆိုတာလည်းပဲ အရမ်းကိုအရေးကြီးတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဘာသာစကားမွေးဖွားလာတဲ့အရင်းအမြစ်မှာ ဒေသဆိုင်ရာကွာဟမှုတွေလည်းဖြစ်လာပြီး ကွဲထွက်သွားပါတယ်။
အဲ့ဒီအထဲက ခွဲထွက်သွားတဲ့အရာတွေကို ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရရင်၊ ပြင်သစ်စကား၊ အီတလီစကား၊ စပိန်စကား စသည်ဖြင့်…..
ဒီဟာတွေကို italic စကားခွဲတွေလို့ခေါ်နိုင်ပြီး၊ မူလကိုအမှန်ပြင်လိုက်ရင် အရင်းအမြစ်တွေဟာ တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်းအမြစ်တွေတစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီဆို ဘာသာစကားရဲ့အခြေခံတည်ဆောက်ပုံက အရမ်းကိုဆင်တူသွားသလို၊ တူညီတဲ့စကားလုံးကိုပဲ လှည့်ပတ်သုံးနိုင်တာကြောင့် မှတ်မိရလွယ်ကူသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်.
ဒါဆိုဂျပန်စာရဲ့အရင်းအမြစ်ကရောဘာလဲ? ဘယ်ဘာသာစကားရဲ့အရင်းအမြစ်နဲ့တစ်ခုတည်းဖြစ်နေသလဲ? သိကြပါသလား….
စာဖတ်သူတို့သိထားတဲ့အတိုင်း ဂျပန်လူမျိုးတွေက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသိပ်မရကြပါဘူး။.
ဒါဟာ ဘာသာစကားတည်ဆောက်ပုံအရ လုံးဝကိုကွဲနေတဲ့အတွက်၊ မူလကပင် မှတ်မိဖို့ခက်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ကတော့ အရင်းအမြစ်လုံးဝကိုမတူတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Kanji တွေသုံးနေတာကြောင့်လည်း တရုတ်နိုင်ငံကဆင်းလာတာလား?
Grammar ပိုင်းကလည်းဆင်နေတာကြောင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံကလား?
လက်ရှိဘာသာစကားလေ့လာမှုပေါ်ကနယ်ပယ်တွေမှာ ဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ တူညီတဲ့စကားအမျိုးအစား မရှိသေးပါဘူး….
တစ်နည်းအားဖြင့် ဂျပန်ဘာသာစကားဟာ သီးသန့်ဖြစ်တည်နေတဲ့စကားလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ပိုပြီးထောက်ပြရရင် ပြည်မကြီးက စကားနဲ့ အိုကီနာဝါမှာ အရင်ကတည်းကသုံးလာတဲ့ 琉球語（りゅうきゅうご）ဆိုတဲ့ဒေသစကားက ဆင်တော့ဆင်နေပေမဲ့၊ နောက်ဆုံးဂျပန်နိုင်ငံတွင်း ဒီစကား ၂ ခုကလွဲရင် အခြားဆက်နွယ်သေးတဲ့ စကားမရှိပါဘူး။
琉球語（りゅうきゅうご） ဆိုရင် ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တောင် ဘာပြောနေလဲ သေသေချာချာနားမလည်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် group တူရဲ့လားဆိုတာတောင် သံသယဝင်မိပါတယ်.. သို့သော်…..
စကားလုံးရဲ့ဖော်ပြမှုအနေနဲ့တော့ Kanji ကိုတရုတ်ပြည်ကနေ မွေးစားထားပေမဲ့ ဘာသာစကားအနေနဲ့တော့ လုံးဝသီးသန့်ဖြစ်နေတဲ့ အရင်းအမြစ်ပါ….
ဂျပန်ဟာ အများနဲ့မတူတဲ့စကားဖြစ်တာကြောင့် မှတ်သားရဖို့အရမ်းခက်ခဲနေသလိုပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ဂျပန်လူမျိုးတွေကလည်း နိုင်ငံခြားဘာသာစကားမှာ သိပ်ပြီးမလိုက်နိုင်ကြပါဘူး…..
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ မတိုင်ခင်မှာ သမိုင်းကနေပျောက်ကွယ်သွားပြီး တည်ရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာကိုမေ့သွားခြင်းခံရတဲ့ လူမျိုးတစ်စုရှိခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာအဟောင်းနွမ်းဆုံး ယဥ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြတဲ့ Sumer လူမျိုးနွယ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုကနေ နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ လောက်မတိုင်ခင်ကနေစပြီး အဲ့ဒီလူမျိုးစုကိုရှာဖွေ့တွေ့ရှိသွားပါတယ်။
နေရာ‌အနေနဲ့ ပြောရရင် Sumer လူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့တာက ဒီမြေပုံရဲ့အပြာရောင်အဝိုင်းလောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်ကနေ 8,000km အထက်လောက်ကို အဝေးမှာရှိနေတာပါ !!!
အိမ်နီးချင်းလို့ ဘယ်လိုမှခေါ်လို့ မရပါဘူး။
ဒါဆို ဒီ ဘာသာစကား ၂ ခုမှာ ဘယ်အရာတွေကဆင်တူနေတာလဲ? ရှင်းပြပါရစေ…
膠着語（こうちゃくご） Agglutinative word
ဂျပန်စကားရဲ့အထူးနာလည်ဖို့ခက်တဲ့အပိုင်း ” 「○○を」、「○○は」、「○○へ」” ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်တွေ ပါတဲ့စကားကို Agglutinative words တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။
ဂျပန်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် ခေါင်းကိုက်ရတဲ့ခက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့၊ Sumer ဘာသာစကားမှာလည်း တူညီတဲ့ စကားလုံးတွဲလို့ဆိုတဲ့ တည်ဆောက်ပုံမျိုးရှိပါတယ်။
ထူးဆန်းတာက Sumer ဘာသာစကားမှလွဲပြီး၊ အဲ့ဒီအနီးအနားတိုင်းပြည်၊ နောက်ပြီးအဲ့ဒါထက်ကျော်တဲ့ ဧရိယာမှာ Agglutinative words တွေဘယ်လိုမှ ရှိမနေဘူးဆိုတာပါပဲ….
表記文字の混在 Mixed notation
English alphabet တွေသာဆို capital letter, small letter ဆိုပြီး ကွဲပြားမှုတွေရှိသော်လည်း အခြေခံ alphabet ဆိုတဲ့စကားသာလျှင်ဖော်ပြပါတယ်။
တရုတ်စကားမှာဆို Kanji တွေချည်းသာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်စကားကတော့ Kanji ၊ Hiragana ၊ katakana ဆိုပြီး အမျိုးအစား ၃ မျိုးရဲ့စကားလုံးတွေကို စာတစ်ကြောင်းမှာပဲ ရောပြီးရေးထားပါတယ်။
ဖော်ပြချက်တွေများနေပေမဲ့ အဲ့ဒါရဲ့တစ်ဖက် စကားလုံးအမျိုးအစားတွေများပြီးရှုပ်ထွေးတာကြောင့် ဒါဟာလည်း နိုင်ငံခြားသားအားလုံး ဒုက္ခတွေ့စေတဲ့ ဂျပန်ဘာသာစကားရဲ့ မူလပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုချင်တာက အဲ့ဒီလိုတည်ဆောက်ပုံက ဂျပန်စကားနဲ့ Sumer စကားကလွဲပြီး အခြားမှာမတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
母音と子音を表記 Notation of vowels and consonants
အက္ခရာနဲ့ ဗျည်း ဝမ်းဆက်ဖြစ်နေတဲ့ဂျပန်စကားဟာ စကားလုံးတစ်ခုချင်းစီကို ပြတ်ပြတ်သားသားအသံထွက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါလည်းပဲ ကြီးမားတဲ့ ထူးခြားချက်ဖြစ်သော်လည်း၊ Sumer စကားလည်း တူနေပါတယ်တဲ့…
ဒီထူးခြားချက်ကလည်း Sumer စကားနဲ့ ဂျပန်စကားတို့ မှာပဲရှိတဲ့ ထူးခြားချက်ကြီးပဲဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
共通する単語がありすぎる Too many words in common
အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ပြင်သစ်စကားမှာ common ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေအများအပြားရှိပါတယ်။
မူလက အင်္ဂလန်ရဲ့တစ်စိပ်တစ်ပိုင်းက ပြင်သစ်ရဲ့ပိုင်နက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်၊ ပြင်သစ်စကားကနေ အင်္ဂလိပ်စကားသို့ ယူသွင်းလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်။
ဒီ ဘုံအသုံးအနှုန်းတွေကိုတော့ နားလည်ပေမဲ့၊ Sumer စကားနဲ့ ဂျပန်စကားရဲ့ common words တွေကိုတော့ ရှင်းပြလို့မရပါဘူး….
common words တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်း တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောနိုင်ပေမဲ့၊ တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပြောဖို့က common ဖြစ်နေတဲ့စကားလုံးတွေက များလွန်းနေတယ် ……
8,000km လောက်ဝေးနေတဲ့ နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံ…
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ မတိုင်ခင်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေက နယ်မြေပြောင်းသွားခဲ့တာလား? ဆိုတဲ့ထူးဆန်းမှုရှိပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြောရရင်၊ အဲ့ဒီ 8,000km အကွာအဝေးရဲ့ ကြားမှာရှိတဲ့ဧရိယာမှာ ဒီဘာသာစကား ၂ ခုရဲ့ ထူးခြားချက်တွေနဲ့တူနေတဲ့ စကားဆိုလို့လည်း တစ်ခုမှမရှိတာက ပိုပြီးတော့ထူးဆန်းနေတာပါ….
နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ မတိုင်ခင်မှာ ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ Sumer လူမျိုးတွေဟာ၊ Doraemon လိုပဲ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် တံခါးကနေ ဂျပန်ကိုပြန်လာတယ်လို့ ဒဏ္ဍာရီပြောစမတ်ပြုရလောက်အောင် ရုတ်တရက်ဖြစ်လွန်းတဲ့ ဆက်စပ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။
စကားမစပ် Sumer လူမျိုးစုဟာ ဘယ်ကနေပေါ်လာတာလဲ ဆိုတာကလည်း ဆန်းကြယ်မှုလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီး အဆင့်မြင့်ယဥ်ကျေးမှုကိုဖွင့်ချလိုက်ကာ၊ နောက်ပြီးရုတ်တရက်ပဲ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်. …..
နက္ခတ္တဗေဒနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေပြီး၊ သူတို့ရဲ့ naked eyes တွေကို ဘယ်လိုမှကြည့်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
天王星 Uranus, 海王星 Neptune, 冥王星 Pluto ဂြိုလ်တို့ရဲ့တည်ရှိမှုကိုသိနေခဲ့တယ်လို့ ပြောကြတဲ့သက်သေလည်း ရှိပါတယ်တဲ့…
天王星 Uranus က 1781 ခုနှစ်၊ 冥王星 Pluto က 1930 ခုနှစ်အထိ ရှိနေမှန်းတောင်မသိရသေးတဲ့ဂြိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး 天王星 Uranus နဲ့ 海王星 Neptune တို့ရဲ့အထဲမှာ ရေရှိနေတာကိုလည်း Sumer လူမျိုးတို့ သိနေခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
လကိုပတ်တဲ့ပြက္ခဒိန်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၊ ၁ ပတ်မှာ ၇ ရက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောလာတာလည်း Sumer လူမျိုးတွေပဲ ဆိုတဲ့ဒဏ္ဍာရီစကားရှိပါတယ်။
ဆေးပညာလည်းပြည်စုံပြီး၊ အတွင်းတိမ်ခွဲစိပ်မှုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တဲ့…
မျက်လုံးခွဲစိတ်မှုဆိုတာ အရမ်းကိုနူးညံ့တဲ့လုပ်ဆောင်ရမှုဖြစ်ပေမဲ့ ဒါကို BC နှစ်ပေါင်း 3000 မတိုင်ခင်ကပင်
နောက်ပြီ ရုတ်တရက်သမိုင်းကနေ ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်…
တကယ်ကို နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့တံခါးကနေ ဂျပန်ကိုရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်တယ်နော်…….
ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေရှိနေသေးတဲ့ Palau နိုင်ငံမှာ ဂျပန်စကားနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါသလား?
ပြောင်မြောက်လှတဲ့နည်းပညာ၊ သံကိုမသုံးဘဲအဆောက်အဦးတည်‌ဆောက် !!!
ဖရဲသီးကို မြန်မြန်စားတဲ့ လျို့ဝှက်ချက် ！
Pure Smile La’Shell Wet Tissue
Gundam ဆိုပေမယ့် Gundam မဟုတ်တဲ့စက်ရုပ် 。。。